Ithegi: ukhuphiswano | Martech Zone
Yintoni ukuKhula ngokuKhula? Nazi iindlela ezili-15
NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 15, 2021 NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 15, 2021 Douglas Karr
Ixesha lokugenca lisoloko linentsingiselo engeyiyo enxulumene nalo njengoko libhekisa kwinkqubo. Kodwa nabantu abaxhaphaza iinkqubo abahlali besenza into engekho mthethweni okanye benze ingozi. Ngamanye amaxesha ukukhwabanisa kuyindlela yokusebenza okanye indlela emfutshane. Ukufaka ingcinga efanayo kwintengiso kuyasebenza ngokunjalo. Kukukhula kwenkohliso. Ukukhula ngenkohliso kwakusetyenziswe ekuqaleni kwabokuqala ababefuna ukwakha ulwazi nokwamkelwa… kodwa babengenalo uhlahlo-lwabiwo mali okanye izixhobo zokuyenza.
Iindlela ezili-10 zeMithombo yeendaba kuLuntu ezenza ukuba iZabelo kunye nokuGuqulwa
NgoMvulo, Juni 11, 2018 Rekha Pant
Ngokuchasene nenkolelo edumileyo, intengiso yemidiya yoluntu ingaphezulu kokungqinelana nezithuba zakho ezikwi-intanethi. Kuya kufuneka uze nomxholo oyilayo kunye nefuthe- into eya kwenza abantu bafune ukuthatha inyathelo. Inokuba ilula njengomntu owabelana ngeposi yakho okanye aqale ngoguquko. Ukuthanda okumbalwa kunye nezimvo azonelanga. Ewe kunjalo, injongo kukuhamba ngentsholongwane kodwa kufuneka kwenziwe ntoni ukufezekisa
Ungabuthintela njani ubuqhetseba kukhuphiswano lwakho olulandelayo kwi-Intanethi
NgoLwesibini, Juni 21, 2016 Douglas Karr
Siza kuphehlelela eyokuqala kwimincintiswano emininzi kungekudala ukutsala iindwendwe ezininzi kwiileta zeendaba ze-imeyile. Ngelixa sinemithombo ebanzi yophuhliso, akukho ndlela yokuba sizakuphuhlisa ukhuphiswano ngokwethu. Siza kusebenzisa iHellowave, umboneleli wokhuphiswano kwi-intanethi. Ngoba? Esona sizathu siphambili: Ubuqhetseba ndiya kunyaniseka kwaye ndivume ngokupheleleyo ukuba ndikhohlisile kukhuphiswano lwe-Intanethi. Kwiminyaka eyadlulayo, besinokhuphiswano lwengingqi kumajelo eendaba ekufumaneni
Amanyathelo ali-12 kwimpumelelo yeNtengiso yezeNtlalo
NgoMgqibelo, Septemba 13, 2014 NgeCawa, ngoSeptemba 14, 2014 Douglas Karr
Abantu baseBIGEYE, iarhente yeenkonzo zokuyila, babeke le infographic ukunceda iinkampani ekuphuhliseni isicwangciso esiliqili sokuthengisa imidiya yoluntu. Ndikuthanda ngenene ukuqhekeka kwamanyathelo kodwa ndiyaxolisa ukuba iinkampani ezininzi azinazo zonke izixhobo zokufumana iimfuno zesicwangciso esiliqili sentlalo. Imbuyekezo yokwakha abaphulaphuli eluntwini kunye nokuqhuba iziphumo zorhwebo ezinokulinganiswa ihlala ithatha ixesha elide kunokunyamezela kweenkokeli